SAWIRO-Sidee Gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye Ay usoo Dhoweeyeen Shacabka Deegaanka Qorulugud Iyo Deegaamada Hoos Yimaada
Wednesday July 12, 2017 - 20:05:18 in by Mahomed Aadan
Qorulugud:(Horseednews)-Shacabweynaha ku dhaqan degmada Qorulugud ee gobolka Buuhoodle, ayaa taageero aan loo kala hadhin ku qaabilay maanta wafti ballaadhan oo
Qorulugud:(Horseednews)-Shacabweynaha ku dhaqan degmada Qorulugud ee gobolka Buuhoodle, ayaa taageero aan loo kala hadhin ku qaabilay maanta wafti ballaadhan oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha xisbiga KULMIYE, ahna murrashaxa madaxweynaha xisbiga Md. Muuse Biixi Cabdi, kuwaas oo socdaallo shaqo oo ay ugu guur galayaan habsami u socodka qaadashada kaadhadhka codbixiyayaasha ku marayey deegaanno kala duwan oo ku yaalla gobollada Buuhoodle iyo Togdheer.
Guddoomiyaha iyo waftigiisa oo xalay guure ku galay magaalada Qorulugud, ayaa badhtamaha suuqa ku qaabilay mawjado dadweyne ah oo boholyow u qaba la kulankiisa, isla markaana u heellan inay dhegaystaan weedhaha uu kula hadlayo, kuwaas oo u galbiyey guriga martida ee magaalada Qorulugud.
Gebi ahaanba dadweynaha ku dhaqan magaalada Qorulugud, ayaa goor hore oo saaka ahayd ahayd isugu soo baxay goob fagaare ah oo ay ku sugayeen guddoomiyaha iyo waftigiisa, waxana halkaas hadallo mahadnaq, bogaadin iyo dardaaran ka jeediyey hormoodka madaxda degmada, kuwa xisbiga, wasiirro, xildhibaanno, madax-dhaqameed iyo weliba hoggaanka sare ee xisbiga KULMIYE.
Guddoomiyaha degmada Qorulugud Md. Maxamed Jar ku-naban iyo guddoomiyaha gobolka Togdheer ee xisbiga KULMIYE Md. Xasan Mataan iyo guddoomiye ku-xigeenka KULMIYE ee gobolka Buuhoodle oo ugu horrayn hadalka u kala dambeeyey, ayaa soo dhaweeyey waftiga uu hoggaaminayo guddoomiye Muuse Biixi, waxana ay shaaciyeen inay dhammaanba shacabka degmadu ka midaysan yihiin taageerada xisbiga KULMIYE.
Chief Caaqil Cali Aadan Af-ku-waranle oo ka tirsan cuqaasha ugu magaca dheer degmada oo madasha hadallo kooban ka jeediyey ayaa si kal iyo laab ah usoo dhaweeyey waftiga, waxana uu dadweynaha reer Qorulugud ku dhiirrigeliyey inay codkooda iy cududoodaba la garab galaan xisbul xaakimka KULMIIYE oo halgan ugu jira inuu markiisii labaad kusoo noqdo talada Dalka, isaga oo caddeeyey in hoggaamiyaha xisbiga KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi yahay shakhsi xaq u leh in hoggaaminta dalka loo aamino.
Guddoomiyaha beelaha Solomadow Md. Saleebaan Gaarriye oo halkaas ka hadlay, ayaa ku dheeraaday sida ay dadweynaha deegaannadaasi u taageersan yihiin xisbiga KULMIYE, waxana uu madaxda xisbiga ugu bushaareeyey inay taladooda ku darsadaan codka reer Qorulugud oo uu KULMIYE xaasil u yahay.
Wasiiru-dawlaha wasaaradda Xannaanada xoolaha Md. Cabdirashiis Maxamuud Riyo-raac, ayaa isaguna guddoomiyaha KULMIYE ugu bushaareeyey inay shacabka reer Qorulugud safka hore kaga jiraan taageerayaasha KULMIYE, isla markaana aan cid kale looga shakiyi jirin, waxana uu ka digay dhegaysiga hadallada xanafta leh ee ay tashuushka ku gelinayaan taageeraya ay KULMIYE u hayaan shacabka reer Qorulugud.
Wasiirka wasaaradda Hawlaha guud, Gaadiidka iyo Guryeynta Md. Cali Xasan Maxamed(Cali-marreexaan) oo madasha ka hadlay, ayaa shacabka reer Qorulugud ugu ku dhiirrigeliyey inay qaataan kaadhadhka codbixinta, isla markaana ay taageeradooda la garab galaan KULMIYE sidii ay markii horeba ula garab geli jireen.
Xildhibaan Saleebaan Cawad Cali(Bukhaari) oo kamid ah mudaneyaasha wakiillada ee xisbiga KULMIYE, ayaa cudduda iyo taageerada ay shacabka reer Qorulugud muujiyeen ku tilmaamay mid astaan fiican u ah guusha xisbiga KULMIYE.
Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE, ahna murrashaxa xisbiga Md. Muuse Biixi Cabdi oo ugu dambayn munaasibadda soo dhaweynta iyo xogwarranka ahayd soo afmeeray, ayaa mahadnaq kaga fal celiyey soo dhaweynta, waxana uu shacabka reer Qorulugud kula dardaarmay inay nabadgelyada ilaashadaan, isaga oo ugu baaqay inay nabadgelyo ku wada noolaadaan iyaga iyo shacabka reer Buuhoodle,.